Root & MM Font Done Easy on J700H V6.0.1 By Min_Oaker - MPPG
Home / Uncategorised / Root & MM Font Done Easy on J700H V6.0.1 By Min_Oaker
minokekar January 8, 2017	Uncategorised 2,685 Views
J7 တွေအတွက် Version 6.0.1 မှာ အလွယ်တစ်ကူ Root လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်
လိုအပ်တဲ့ ဖိုင်လေးတွေ ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.
အရင်ဆုံး ဖုန်းကို USB Debugging On ပေးပါ နောက်တစ်ခုက Oem Unlock လည်း on ထားပေးပါ
ပြီးရင် ကျနော်ပေးထားတဲ့ Root & MMFOnt ဖိုင်လေး ကို ဒေါင်းလိုက်ပါ
Password=Min_Oaker နဲ့ zip ဖြည်လိုက်ပြီး အထဲမှာပါတဲ့ SuperSU ဖိုင်လေးကို
SD Card ထဲ ထည့်ထားလိုက်ပါ .ပြီးရင် ဖုန်းကို Downloading Mode ခေါ်လိုက်ပါ.
Odin ကို ဖွင့်လိုက်ပါ အထဲက PDA or AP နေရာကနေ ကျနော့် ဖိုင်ထဲက TWRP လေးကို
ရွေးပေးလိုက်ပါ.့ ပီးရင် Start. >> Done
တက်လာတာနဲ့Recovery Mode ထဲသွားပါ. SD card ထဲက supersu ဖိုင်လေးကို install လုပ်ပေးပါ
Logo တက်လာပြီးလို့ Home Screeen ရောက်တာနဲ့ Root Acess ရရှိပါ
ကျနော့်ဖိုင်လေးထဲ ifont Donate လေးနဲ့ zawgyi ကို Download ဆွဲ ပြီး Font ချိန်းလိုက်ရင်တော့
မြန်မာစာ 100 % မှန်ကန်ပါပီ.
Download ROOT&MM Font_J700H_6.0.1_(Pass=Min_Oaker).zip (20) MB
လက်ရှိ ခေတ်စားနေတဲ့ Error အကြောင်းတွေ နောက်ဆုံးပေါ် FRP , ID , Account Lock
အကြောင်းတွေကို အသေးစိတ် Photo or Video Tutorial တွေနဲ့ Online မှ တစ်ဆင့် လေ့လာနိုင်မယ့်
Mobile Software Advance Online Training Centre ကိုလည်း ၀င်ထားကြဖို့ မမေ့နဲ့နော်.
Group ထဲ ၀င်ရောက်လိုပါက. ကျနော့်ကို Facebook messanger မှ တစ်ဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်.
Previous Samsung SM-G361H FRP Remove Easy Method By Min_Oaker
Next OPPO R7 Plus (R7plusfEX) – unbrick qualcomm 9008 9006 (TOOLS + ROM)